Ny dingana famolavolana any amin'ny orinasa rehetra dia atao tsikelikely. Aza manandrana manarona ny zava-drehetra amin'ny fotoana iray. Zava-dehibe ny mandinika ny lafiny rehetra ilaina. Mba hahafahanao mora kokoa sy mora azo kokoa noho ianao handamina sy hanatontosana vokatra tsara, dia nanapa-kevitra ny hanangana drafitr'asa iray. Araka izany, ny karazana sy ny karazana drafitra ankapobeny dia noraisina sy voafehy. Ohatra: strategika, taktika ary miasa. Mbola misy karazana fandrindrana hafa toy ny kalandrie. Azo ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany izy io, tsara tarehy, toy ny karazam-panomanana any an-tsekoly, ary ho an'ny karazam-pananganana orinasa.
Tanjona, karazana ary fomba fanomanana
Ny karazana drafitra stratejika dia fomba fijery, ny fandrindrana izay manondro ny fitarihana ny hetsika ho fampiharana sy ny fanatanterahana ny tanjon'ny orinasa. Ny fandrindrana ny tetikady dia miavaka amin'ny fomba hafa:
ny asa natao araka ny drafitra dia mikendry ny ho avy, tsy mamaritra ny fivoaran'ny toe-javatra ankehitriny sy ny asan'ny orinasa;
Ny drafitra stratejika dia tsy mifototra amin'ny famaritana ny teny na loharanom-bola nolaniana. Izy io dia maneho ny fomba fijery ankapobeny sy ny torolalan'ny hetsika ataon'ny orinasa amin'ny fivoarany manontolo;
Mifanohitra amin'ny fomba fiasa hafa, ny rafi-pandaminana stratejika dia mandà ny fepetra toy izao izay ny takelaka dia omena amin'ny alàlan'ny tatitra avy amin'ny lasa ihany.
Ny drafitra taktika dia antsoina hoe karazana "planeta", izay manomboka amin'izao fotoana izao. Ohatra, asa manan-danja, konkretisation. Amin'izao fotoana izao, nisy fanapahan-kevitra noraisina mba hivarotra sy hamotsorana ireo vokatra eny an-tsena, izay manondro ny loharano takiana amin'izany. Ny asa dia voaisa, eo ho eo, mandritra ny 1-2-3 taona.
Ny karazana fandaminana planina dia ny fandrindrana ny asa natao tanatin'ny fotoana fohy (ao anatin'ny herintaona, isaky ny volana sy tapany). Amin'ny maha-ampahany ny fampiharana io drafitra io, ny vola raisina dia raisina amin'ny antsipiriany, ny fanitsiana sy ny fanovana dia atao amin'ny valiny sy ny olana ankehitriny. Ny zavatra rehetra tsy noheverina sy tapa-kevitra teo aloha dia heverina ho toy ny fomba henjana.
Ny karazan-drafitra telo misy ny planeta ara-bola, toy ny iray hafa, dia tokony hampifandraisina sy hamboarina ho an'ny tanjona iombonana iraisana. Izy ireo dia tsy maintsy mamorona rafitra tokana sy maromaro ao anatin'ny drafitra iray. Tsy hanao zavatra tsirairay izy ireo. Mba hanatanterahana ny iraka ataon'ilay orinasa dia azonao atao ny mandray anjara amin'ny drafitra rehetra sy ny karazana drafitra.
Misy karazana fandaharam-potoana roa - tsotra sy tsotra (fohy). Ao amin'ny fenitra dia nofaranana izy: "Famolavolana avy amin'ny teny voalohany", "Fandaminana avy amin'ny fe-potoana" ary " Planina manomboka androany ". Mifototra amin'ny tahirim-potoana, ny fanombohana sy ny famaranana ny hetsika sy ny asa dia novaina.
Ho an'ny drafitra fohy dia misy lisitra ny fe-potoana sy fe-potoana hanatanterahana ny asa. Ity endrika ity dia tsy mitondra asa fanampiny, toy ny - fanatsarana, fa tsotra sy tsotra. Misongadina amin'ny fahitana azy io izy ary voavolavola amin'ny fanatanterahana asa amin'ny hoavy. Raha manana tanjona ianao, ary fantatrao ny fomba hanatanterahana izany - manararaotra ny drafitra tsotra sy tsy manadino fotoana betsaka amin'ny fanangonana tsy ilaina amin'ny drafitra hafa! Mora kokoa ny manao zavatra noho ny fikasana fotsiny! Saingy ilaina ny mitadidy fa ny drafitra hendry sy mahasoa dia ny fanalahidin'ny fahombiazana ary ny antsasaky ny asa!
Internet marketing - ireo tetikady malaza sy mahomby
HYIP - inona moa izany, ny dikany amin'ny raharaham-barotra sy ny tanora janga
Fikolokoloana amin'ny ho avy - inona no tadiavina amin'ny ho avy?
Zeitnot - ahoana ny handresy ny fotoana fanerena, ny teknolojian'ny fitarikandro ratsy
Ahoana no hamonjena amin'ny vokatra?
Ahoana ny fomba hahatonga azy ireo ho mpampita-pahaizana ary hanao fikarakarana mpampianatra amin'ny hetra?
Ahoana no hanokafana fantsom-bola ary hahasarika vintana tsara?
Ny fomba hahazoana vola - Hevitra
Moa ve ny resaka vola tsara sa ratsy?
Iza no mpanoratra mpanoratra ary inona no ataony?
Ahoana no hanokafana fivarotana kafe amin'ny scratch?
Ahoana no hanokafana café sakafo haingana amin'ny scratch?
Ahoana no hahazoana vola amin'ny mpiara-mianatra?
TOP 17 tena tandone sakafo mahasoa
Notaterin'ny haino aman-jery ny tantara nosoratan'i Charlize Theron sy Seth MacFarlane
Sakafo avy amin'ny cranberry ho an'ny hena
Maskina avy amin'ny teboka mainty miaraka amin'ny karbaona mavitrika
Ahoana ny fomba handraisana hodgepodge amin'ny multivark?
Mamy karazana karaoty
Pedicure - loha lamaody 2014
Manorata ny rahalahy amin'ny andro nahaterahany
Ny kintan'i Frank dia mitafy
Safidy sakafo maraina
Ahoana no nahafinaritra an'i Emilie Clarke tamin'ny fialantsasatry ny Krismasy?
Trano avy ao an-trano
Fluorography tamin'ny fitondrana vohoka
Vetivety dia esorina ny fery eo ambany maso.
Mpankafy "nahita" an'i Michael Jackson teo amin'ny sarin'ny zanany vavy
Ahoana no hijerena ireo olo-malaza amin'ny lasa raha nosihan'ireo mpanakanto izy ireo?
Antibiotika ho an'ny kohaka